Fifamezivezen’ny posy sy sarety Mila hentitra kokoa ny fanaraha-maso
Sarety nandika lalàna miisa 20 hatreto no fantatra fa nampidirina “fourrière” ho an’Antananarivo Renivohitra.
Nohamafisin’ireo tompon’andraikitra fa manomboka amin’ny 7 ora ka hatramin’ny 10 ora maraina; amin’ny 12 ora ka hatramin’ny 2 ora tolakandro; amin’ny 4 ora mandra-pisavan’ny fitohanan’ny fifamoivoizana dia ora tsy azo ifamezivezen’ny posy sy ny sarety eto an-drenivohitra. Nohamafisina ihany koa fa tsy azon’ny Posy sy ny Sarety idirana ny eny afovoan-tanàna sy ny eny amin’ny toerana fiakarana toa an’Analakely, Anosy, Mahamasina, Ambohidahy, Ambohijatovo... Tsy azon’izy ireo hoentina ihany koa ny entana toy ny ranon-tany, ny barika, ny kidoro “éponge” ary ferana ho 1 taonina sasany ny vesatry ny entana tokony ho zakan’ny sarety ary 500 kilao eo kosa ho an’ireo posy. Hita anefa omaly alarobia fa mbola maro ny toerana nahitana posy sy sarety mitondra entana amin’ny ora tsy tokony handehanany eny amin’ny arabe. Nisy koa ireo mbola nitondra ranontany. Midika izany fa tsy ampy ny famoahana fepetra fotsiny fa tsy maintsy misy fanaraha-maso isan’ora sy isan’andro ataon’ny mpitandro filaminana sy ny kaominina mba hitsirihaana ireo mandika lalàna